Indlu yeeNdwendwe kwiNature Park kunye nePool-BlueBird Suite
Igumbi lakho lokulala e indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguMark
Wamkelekile kwi-Koppany Pines Lodge indawo yokuhlala ekhuselweyo i-Koppányvölgy Naturpark ebekwe kwindawo yethu encinci yenkampu ekhule ukusuka kwigadi yeziqhamo kunye negadi yemifuno. Sisemnyango wendlela echongiweyo ye-Koppányvölgyi yokukhwela intaba ephantse ibe yi-100 km ubude kwaye inokujongwa ngeenyawo, ngebhayisekile okanye ngehashe. Indlu yeendwendwe inamagumbi ama-2 eendwendwe, iRose Room eneensuite kunye neBlueBird Suite enendawo yokuphumla yabucala kunye negumbi lokuhlambela. OLU LUDWE LWEBLUEBIRD SUITE.
I-Koppany Pines Lodge yindlela eyodwa yokonwabela izinto ezintle ngaphandle ngelixa usonwabela ubunewunewu bobunewunewu basekhaya. Ungaqubha echibini, uphonononge amahlathi kunye namaphandle ajikelezileyo, izilwanyana zasendle kunye nezilwanyana, tyelela iindawo ezishushu. Ebusuku sebenzisa isiselo kwibhari, uhlale kwaye upholile ujikeleze indawo yokucima umlilo kunye ne-toast marshmallows. Qalisa uthando ngendawo yokujonga iinkwenkwezi okanye wonwabe udlala iibhowuli ezikhanyayo ngaphambi kokuba ukhwele ebhedini kwaye uzigqume ngeeduvethi ezithambileyo zomqhaphu kunye neebhedi zomqhaphu zaseYiputa. Ukuphunyuka okumangalisayo kuyo yonke into.
Hlala ngokuzolileyo kwaye unethuba eliphantse libe yi-100% lokubukela izilwanyana zasendle ezifana nexhama elibomvu, ixhama kunye nempungutye. Iintaka ezintle namabhabhathane anomtsalane kwindawo esihlala kuyo. Ezinye izilwanyana ezinomdla, ezinqabileyo ezibonwa ngokukhawuleza yizinyosi, i-oriole yegolide, i-white-tailed eagle, ihlungulu, i-yellow-bellied toad, i-European pond turtle, i-stag beetle, i-alpine longhorn beetle, i-worm glow-worm, i-mantis ethandaza. Kukho omnye umsebenzi wendalo ongafuni nokuba uhambe kwindawo yendalo: ukujonga inkwenkwezi. Kuba kuncinci ungcoliseko lokukhanya ngenxa yophuhliso oluphantsi lwepaki yendalo, isibhakabhaka sasebusuku sinokumangalisa ngokupheleleyo. Sibonelele ngezixhobo ukuze ukwazi ukuyithanda yonke iMilky Way.
Ukhetha ukuhamba ukuya kwidolophana uya kukwazi ukusela kwi-kocsma yendawo (i-pub) okanye uthathe ibhasi eya eTamasi, indawo ekufutshane neebhafu ezintathu ze-thermal. Kwakhona siyakwazi ukuququzelela uhambo oluya kubavelisi basekuhlaleni bobusi, iwayini kunye neziqhamo.
Ngelixa sikwindawo yasemaphandleni asikho kude kwaye ngenxa yobutyebi bendalo bommandla kuya kuhlala kukho izinto ezinomdla zokuzibona. Unxweme olusemazantsi eLake Balaton ziikhilomitha ezingama-30 kuphela, elona chibi likhulu laseYurophu elinamanzi acocekileyo libonelela ngeenqanawa kunye nesikhitshane esinika ithuba lokufumana unxweme oluseMantla, luxakekile kwaye luphithizela lukwahluke kakhulu ekuzoleni kwepaki, kodwa kukhulu ukuphonononga okufanayo. . Kukho iinqaba, iimyuziyam kwaye ngokucacileyo utshintsho ukuthatha uhambo ukuya Budapest.
Amaxabiso asekelwe kwisidlo sakusasa selizwekazi kodwa uphuculo luyafumaneka, njengoko sisisibonelelo esigcweleyo sasemini.
I-Koppanyszanto ... yincasa 'yeHUNGARY YOKWENENE' enethuba lokubona izindlu zesixovulelo sewayini phakathi kwezidiliya, indawo yokugcina izilwanyana yasekhaya, izindlu ezixhonywe ngepaprika kunye nehashe elidlulayo kunye neenqwelo, iKoppanyszanto iphantse yaziva ngathi yinxalenye yeminyaka yakudala. Thatha uhambo oluya kwivenkile yasekhaya okanye undwendwele i-kocsma (i-pub)/pizzeria kwaye wabelane ngesiselo nabahlali abasamkele ngobubele obunjalo. Kukho ibala lokudlala, ibala lebhola ekhatywayo kunye nomjelo wokunxiba abantwana okanye ukwenza ipikniki. Icawe ime ngokuzingca encotsheni yenduli ejonge ilali kwaye ngokuqinisekileyo ikufanele ukutyelelwa. Ibhasi iya kukusa eTamasi ekufutshane ukuze ujikeleze iDeer Park, mhlawumbi uthathe uhambo, uhlole idolophu okanye undwendwele i-Thermal Spa.
Kukho iminyhadala yeelali ezininzi apha enyakeni apho abantu belali badibana kwaye balungiselele ukutya, batye, benze imiboniso, badanise, banxibe iimpahla zesintu kwaye basele iwayini. Kuyenzeka ukuba uthenge iwayini ngqo kumafama okanye kwipalinka yesiHungary.
Umbuki zindwendwe ngu- Mark
Sihlala kwisiza kwaye ke siyafumaneka ngamaxesha amaninzi. Simema iindwendwe ukuba zabelane ngetafile yethu ngokuhlwa kwaye imenyu iya kuboniswa rhoqo kusasa kunye nokuqinisekiswa okufunekayo ngo-12 emini.